Saliid Bixiyaal ah oo Bilaash ah, Kaydinta Humidifier | AromaEasy
Alaabta / $0.00
Kali Saliida Muhiimka ah
Saliidaha Muhiimka ah Jumlada
Xirmooyinka saliidda ee muhiimka ah
Xirmooyinka Saliida ee Muhiimka ah
Kala firidhsan hadhuudhka alwaax
Fidiyaha saliida Nebulizer
Bacda Saliidaha Muhiimka ah
Saliidda Aasaasiga ah
Qoraal Gaarka ah
Sumadda Gaarka ah | Samee sumad | Uguyaraan
Bilow Calaamadda Gaarka ah
Khidmadaha Dejinta Astaanta Gaarka ah
Soo daadinta Su'aalaha
Khidmadaha Dejinta Dhibicda
Is -dhexgalka dukaamaysiga amarada
Hadda qaado muunado
* Waxaan qabanaa dhamaan wixii ka dambeeya muuqaalka shaqeynta
* Waxaad xooga saareysaa kobcinta ganacsigaaga
Qiimaha iibka ugu wanaagsan ee jumladaha saliida
SIDEE AYAAN UGU DARAN KARIN KARTAA ganacsigaaga?
Haddii aad awood u leedahay inaad ku maal gasho wax ka badan $ 500 wax soo saarka, waxaan kaa caawin karnaa samaynta badeecadaada, sameysan karto xirmo, oo aan ku gaarno riyadaada sumadda.
Waxaan u adeegi karnaa dhammaan shuruudahaaga e-maylka, oo ay ku jiraan calaamadaynta khaaska ah, dhejiyeyaasha FNSKU, u dhoofinta Amazon, ka soo daadinta Shiinaha ee iibiya dukaameeyeyaasha.
Iibiye ahaan, waxaad soo bandhigeysaa isla agab la mid ah tartanadaada. Sure, sicirka hoose wuxuu kaa dhigi karaa mid soo jiidasho leh, laakiin ugu dambeyntii waxaad ganacsigaaga ka dhigi doontaa mid aan faa'iido lahayn. Ha iloobin awoodda baakadaynta xitaa xarkooda calaamadaynta summadaynta. waxaan u dhistay warshadeeyayaal, ganacsiyada yar yar iyo qof walba oo ku dhex jira.
Calaamadeynta Gaarka ah
Waxaan sameynay "shaqada wasakhda ah" markaa waxaad diiradda saari kartaa suuq-geynta!
Ma ubaahantahay sumado khaas ah? Waanu kaa daboolnay. Waxaan xitaa ku bixin karnaa adeegyo nashqadeyn xirfadeed iyo waxyaabaha loo yaqaan 'turnkey custom' oo ah badeecado gaar loo leeyahay oo leh calaamado waaweyn.
Bogga wax soo saarka ee AromaEasy wuxuu bixiyaa qiimayaal balaadhan oo cad oo ah meesha jumladleyda ay ka ganacsadaan
waxay heli karaan dalabyo kaladuwan marka loo eego shuruudaha iibka. Waxaan sidoo kale ku bixinnaa adeegga kalkaalinta internetka haddii aad leedahay baahi isku-darka alaabooyin kaladuwan ama amarro waaweyn
Hadaad leedahay fikrad wax soo saar (kickstart, publicfunding), laakiin aadan aqoon sida loo soo saaro, waxaan kuugu hagaynaa talaabo talaabo talaabo ah.
Waxaan bixin karnaa qiimo hoose, ilaa 20 qof oo kooxda ah, iyo xalal dheeri ah oo lagu taageerayo ganacsigaaga sii kordhaya.
Qaab dhismeedkayagu waa mid muuqda oo kharash badan oo qarsoonna ma laha. Qiimaheena ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu tartanada badan adduunka, waana qeyb yar oo ka mid ah waxyaabaha been abuurayaasha kale ee Mareykanka ama Yurub sida caadiga ah kugu soo dalacaan. been abuur hoose iyo baahiyaha kulanka. Waxaan isku dayeynaa intii karaankeena ah inaan badbaadino lacagtaada iyo waqtigaaga.
Sanadihii aan soo dhaafnay waan ku faraxsanahay inaan ilaalinay heerka gaarsiinta waqtiga oo ah 99%. Waad dooran kartaa DHL iyo adeegyo kale oo diris ah iskuna dheellitirka xawaaraha iyo miisaaniyadda. Waxaan u adeegsanaa oo keliya shirkadaha shirkadaha la isku halleyn karo iyo sumcaddooda.
24 saacadood Adeegga Macaamiisha
Mar alla markii aad wax dhib ah kala kulanto, waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa qof adeegga macaamiisha ah oo nool si aad uga jawaabto emaylkaaga ama farriimahaaga.
Barnaamijka Dhoofinta Dukaanka
Waad iibinaysaa, waanu rarnaa
Waad Haysaa Faa'iidada.
Hadda bilow hadda
Amaradaada ayaa si toos ah loogu raray xarumaha fulinta Amazon. Sifeyn ikhtiyaar gudaha ah iyo xirmo ayaa jira.
Qaybaha caanka ah
Qalabka Saliidda ee Muhiimka ah
Dabeecadda alwaax Diffuser
Kaydinta Shidaalka ee Aasaasiga ah
Dhar-galaas 3D galaas ah
Fiidiyow ku saabsan jumlada saliida jumlo baahsan
Kuwa ugu caansan jumlada saliida jumlo baahinta
Top 6 - 10ml Saliidaha Muhiimka ah E128 Qalabka Bilawga udugga Saliida Muhiimka ah
Saliida Cunnada Muhiimka ah ee Chestnut Aroma Diffuser X131
Fircooniga Xamuulka ah ee Saxda ah ee Saliidaha saliidda Dheecaanka ah ee loo yaqaan 'Aroma Diffuser X117U
Saliidaha Biyo-Muhiimka ah ee Sunta Birta ee Xaddiga X118
Xaraashka Biyo-Muhiimka ah ee Sariirta Sare ee loo yaqaan 'Aroma Diffuser X117G1'
Gawaarida Jumlada Gawaarida Gawaarida Saliida Muhiimka ah X129 (Biyaha)
Caddaan Jumlo Caan ah oo Saliida udgoonta ah X125A (Biyaha)
Saliida Cuntada Saxda ah ee saliidda 'Gourd'
Ma Khibrad u Leedahay Arimaha Marka Aad Kala Soo Baxayso Kala-Bixiyaha iyo Saliida Muhiimka ah Soo-Saaraha
Way adag tahay in la helo oo la doorto shirkad saliideysan oo aamin ah oo la aamini karo.
Tayada aan caadiga ahayn ee saliidaha lagama maarmaanka u ah suuqan, Alaab-bixiyeyaal yar ayaa damaanad qaadi kara daahirsanaanta iyo cimriga saliidaha lagama maarmaanka ah. Waa maxay waxa intaa ka sii badan, saliidaha lama huraanka ahi kuma hoos jiraan sharciga FDA.
Waqtiyo dheer oo horseed ah oo saliidaha lagama maarmaanka ah ka imanaya alaabada qaar, iyo Waqtiga Bixinta waa Dammaanad la'aan.
Bixiyeyaasha tirada yar ayaa ku siin doona Xallo Markaad la kulanto arrimo farsamo oo ah kala-saare saliid muhiim ah.
In kasta oo alaab-qeybiyeyaal badan ay sheegtaan in ay dan ka leeyihiin shirkadaha yaryar, haddana runtii sidaa ma aha.
Bixiyeyaasha tirada yar waxay leeyihiin Adeeg buuxa oo leh baahiyaha saliida faafa, Soosaarka, Iibinta, horumarka ganacsiga, Taageerada Farsamo, iyo Adeegga Iibka Kadib.
Maxaa loo Xusuusanayaa Aromaeasy
TAYADA SARE EE saliidaha lagama maarmaanka ah iyo kuwa faafiyeyaasha ah ee qiimaha jumlada Waxaan leenahay aqoon isweydaarsiga ugu wanaagsan ee warshadaha faafida ee Shiinaha, iyo saliidaha lagama maarmaanka ah ee laga helay beeraha adduunka.
Kooxdayada wax soo saar waxay u hogaansamaan UL, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Tick, RoHS, FCC, CE & GS heerarka, waxayna maareeyaan naqshadayaasha iyo shaqaalaha si loo hubiyo tayada.
Laga soo bilaabo soo iibsiga alaabta ceeriin illaa wax soo saar, AromaEasy wuxuu leeyahay nidaam maamul oo hagaagsan oo leh kormeer tayo leh. Waxaan kaa caawinaa koritaankaaga ganacsiga Waxaan dan ka leenahay ganacsigaaga!
AromaEasy waxay leedahay shaqaale farsamo yaqaan ah si ay kuu siiyaan tababbarka shaqaalaha iyo adeegyada la-talinta farsamada si looga caawiyo ganacsigaaga inuu koro. Adeegyadani waa bilaash.
Kobcintayada ganacsi waxay ku saleysantahay kobacaaga ganacsigaaga. Saadka iyo saadka ganacsiga Waxaan fahamsanahay adeegyada adeegaha ugu wanaagsan ee looga baahan yahay nooc kasta iyo baaxaddiisa ganacsi oo kaladuwan.
AromaEasy waxay leedahay saad xirfadeed iyo qeybinta, si loo hubiyo in alaabadaadu ay si sax ah u keento waqtiga. HAL-KA-MID AH ADEEGA ADEEGGA 24/7 Adiga Kooxda xirfadda leh ee iibka kadib waxay si joogto ah ugu soo booqdaan internetka, jawaab deg deg ah 24 saacadood gudahood.
AromaEasy waxay lashaqeeysaa soosaarayaal lagu kalsoonaan karo oo ka kala yimid adduunka, si loo dammaanad qaado tayada saliidaheena lagama maarmaanka ah. Taasi waa uun bilow.
Waxaan u sameynay shaybaar warshad kasta oo asaasi ah lix qaaradood, si loo hubiyo in macmiil kastaa helo saliidaha lagama maarmaanka u ah.
Sidoo kale, waxaan u soo qaadanay heerarkeenna sareeya qof kasta oo aan la shaqeyno, hoggaamiyaha alaab-qeybiyeyaasha si loo wanaajiyo howlahooda si ay ula socdaan heerkayaga.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa sida ugu fiican, waxaana ballan ku qaadnay inaan xitaa ka fiicnaanno berrito sida aan maanta nahay.
Iibinta iibinta saliida jumladaha iibiya saliida jumladaha ugu wanaagsan
Bacaha saliida ee muhiimka ah
100% Saliid Muhiim ah oo Saafi ah
Khadka wax soo saarka ee jumlad saliida baahsan diffuser
Khadka waxsoosaarka ee AromaEasy wuxuu qaataa qulqulka qulqulka, qalabaynta otomaatiga ah iyo wax soo saar sare.
Khadka waxsoosaarka wuxuu la kulmi karaa cabirka in kabadan 200,000 udgoon udgoon bishiiba. Hadana waxaan u soo saarnaa 2 milyan oo caraf udgoon caraf sanad walba macaamiisha adduunka oo dhan.
Hawl wadeennadu waxay soo qaateen tababar xirfadeed. Xirfadaha wax soo saarka leh ee xirfadaha leh iyo tayada xirfadda u dhiganta ee bixiya dammaanad lagu kalsoonaan karo ee soo-saaridda tayo sare iyo caraf udgoon tayo sare leh.
Aqoon isweydaarsiga wax soo saarka ee shirkadda ayaa si adag loo maareeyay iyada oo la raacayo tilmaanta 5S si loo hubiyo nadaafadda, kala dambeynta, hufnaanta iyo amniga aqoon isweydaarsiga.
Wada-hawlgalayaasha Waa inaan Noqonno Mid Mahad Leh
Markii ugu horreysay ee wax looga qabto AromaEasy. Iibiyaal aad u la isku halleyn karo oo si xawaare leh loogu dhoofiyo Mareykanka. Dhammaan su'aalaha si dhakhso leh ayaa looga jawaabay. Mar labaad ayey ka iibsan doontaa AromaEasy! Nasiib wacan !.
U adeegashada AromaEasy waxay u shaqaysaa si la yaab leh si dhakhso leh oo dhakhso leh. Xitaa caymiska gaadiidka iyo adeegga dabagalka ayaa lagu soo daray.
Waad ku mahadsan tahay, tani waa markii ugu horreysay ee aan u isticmaalno AromaEasy soo iibsashada websaydhka, iyadoo la adeegsanaayo sharcigaaga dammaanadda, waxaan dareemeynaa nabadgelyo iyo aaminaad adeegyadaada. Waxaan sii wadi doonnaa iibsigan mustaqbalka.
Kalasaarasho saliida jumlo ah oo dhan
Waxaan jecelahay isticmaalka Aromaeasy inaan ka helo alaabtayda. iyagu waa alaabo tayo sare leh sidoo kale iibiyaasha way fududahay inay la shaqeeyaan oo ay kaafiyaan himilooyinkayga sareeya. Sidookale, lasocodka xirmooyinkeyga waxay gacan ka geysataa dejinta himilooyinkeyga ah in alaab la ii diro Mareykanka.
Ku saabsan AromaEasy
AromaEasy® ayaa ku siineysa badeecada udgoonkeeda dabiiciga ah ee ugu fiican si aad u taageerto wanaaggaaga.
AromaEasy waxay in ka badan 12 sano oo khibrad ah u leedahay soosaarida carafta warshadaha faafa. Waxaan ku siinaa faafiyeyaasha iyo saliidaha lagama maarmaanka ah qiimaha jumlada, oo keenaya alaab-qeybiyeyaal kale. Iyo kuwa baahiya saliideena lagama maarmaanka ah waxaa lagu iibiyaa adduunka oo dhan qiime dhan 130 milyan sanadkii. Ka dib sanado badan oo horumarineed, AromaEasy waxay kujirtay booska hogaaminta R&D shirkadaha ganacsiga isla ganacsiga. Waxaan soo saareynaa in ka badan 30 nooc oo cusub oo ah kuwa faafa caraf udgoon sanad walbana waxaan kuu qabannaa adeeg adiga kuu gaar ah.
Waxyaabaha ku saabsan Nidaamka Maamulka Tayada
AromaEasy waxay heshay taxane shahaadooyin sida ISO9001, ISO14001, BSCI, iyo OHSAS18001. Mid kasta oo saliidaha saliida leh ee loo yaqaan 'AromaEasy' waxay muhiim u tahay baaritaan adag si loo hubiyo inay ku jiraan qaabkooda ugufiican, iyagoo geynaya gurigaaga oo aan lahayn wax wasaq ah, kiimikooyin lagu daray ama waxyaabaha lagu daro. Tan iyo bilowgii, AromaEasy waxay ku dadaaleysaa inay u keento fayoow iyo farxad nolosha kuwa ay taabato.
Ku saabsan tikniyoolajiyadeena ugu dambeysay
AromaEasy waxay siisaa saliidaha lagama maarmaanka ah iyo kuwa faafiya 70,000+ dukaamada waaweyn, meelaha lagu qurxiyo & hudheelada guud ahaan Waqooyiga Ameerika. Waxaan dhegeysaneynaa jawaab celinta Isticmaalayaasha Kadibna waxaan keennaa fikrado cusub oo miro dhal ah, noloshaada wanaajinaysa.
Qalabka hawo qaadashada ee 'Aroma diffuser', xirmooyinka aromatherapy-ga, farsamooyinka dusha sare ee dhoobada leh ee ay ku jiraan awoodda Bluetooth®, kala-duwanaanshaha miyir-qabka ah, iyo qalabka isgaarsiinta bilaa-waayirka ah ayaa ah dhowr tusaale oo ka mid ah burburka uu AromaEasy ™ dunida u kashifay. Shaqadayadu waxay tahay dejinta heerar sare si aan dunida uga dhigno meel wanaagsan.
Kordhin soo celintaada maalgashiga shirkada 'AromaEasy wholesale' ama shuraako ku xiran. Halkan AromaEasy
SII CADI LACAG LA'AAN
Nala soo xiriir Hada
12+ Fooxa Faa'iidooyinka Saliida Muhiimka ah iyo Isticmaalkeeda Balaaran
Frankincense faa'iidooyinka saliida lagama maarmaanka ah Saliidaha Muhiimka ah ayaa loo isticmaali jiray kumanaan sano iyaga [...]
Sida Loo Sameeyo Nadiifinta Gacanta Guriga
sida loo sameeyo gacmo nadiifiyaha Haa, waxba kama garaacaan dhaqidda gacmaha illaa iyo hadda si looga hortago cudurrada faafa sida [...]
Saliidaha Muhiimka u ah Nabarada
Halkan waxaa ah tusmada kooban ee AromaEasy ee ku saabsan Saliidaha Muhiimka ah ee Nabarrada nabarrada nabarrada leh waxay noqon karaan kuwo aad looga xumaado [...]
Saliidaha Muhiimka u ah Xanuunka Dhabarka
Saliidaha Muhiimka ah ee Xanuunka Dhabarka Daraasad ayaa muujineysa in qiyaastii 80 boqolkiiba dadka Mareykanka ay la kulmaan [...]
Saliidaha Muhiimka ah ee Ruuxiga ah
Saliidaha lagama maarmaanka ah ee dhirta ayaa had iyo jeer door ka ciyaara xafladaha ruuxiga ah, iyagoo dadka ka caawinaya inay sii joogaan [...]
Saliidaha Muhiimka ah ee Jeermiska Dila
Halkan waxaa ah tusmada kooban ee AromaEasy ee ku saabsan saliidaha lagama maarmaanka ah si loo dilo jeermiska Inta lagu jiro waqtiyadan adag, [...]
Sida Loo Isticmaalo Saliidaha Sunta Aasaasiga Ah
Mashruucani waa tilmaamaha ugu dambeeya ee AromaEasy ee ku saabsan sida loogu isticmaalo saliidaha lagama maarmaanka ah qubeyska. [...]
Saliidaha Muhiimka ah ee Dayactirka Biyaha
Boostani waa hage ku saabsan doorashada saliidaha lagama maarmaanka u ah dawaynta dabiiciga ee biyaha [...]
Ganacsiyada adduunka oo dhami way aaminaan
AromaEasy si ay u dhisaan magacyadooda
Waxyaabaha loo yaqaan 'SKUs'
MAGAALADA Warshadaha CA 91745
ARAGGA IYO HAWLGALKA
Xeerarka qandaraaska eex la'aanta
Ma jiro siyaasad hadiyad ah
Is-qor si aad u noqoto kan ugu horreeya ee wax ka ogaada AMAZING soogalootiga cusub, iibka iyo waxyaabo intaa ka sii badan!
Copyright © 2022 Udgoon
ItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandKuuriyada waqooyiWaqooyiga MakedoniyaNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanTerritory FalastiiniyiintaPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQadarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé iyo PrincetonSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Martin (qayb Dutch)Saint Martin (qayb Faransiis)Saint Pierre iyo MiquelonSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth Georgia / Islands SandiwiijSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard iyo Jan MayenSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Kingdom (UK)United States (US)United States (US) Islands Fogfog YarUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamIslands Virgin (British)Islands Virgin (US)Wallis iyo FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Xulo doorasho ...AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDegmada Of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingCiidamada Qalabka Sida (AA)Ciidamada Qalabka Sida (AE)Ciidamada Qalabka Sida (AP)
Lambarka Telefoonka *
Ma xiisaynaysaa tijaabooyin bilaash ah * HaaMaya
Shaybaar bilaash ah ayaa xiiseynaya
Qaar kale ayaa tijaabooyin bilaash ah xiisaynaya * Macaamiil kastaa wuu ku kooban yahay inuu helo 6 muunad oo bilaash ah oo saliidaha lagama maarmaanka ah iyo 1 muunad oo bilaash ah oo fidiyaha ah.
Ma jiraan wax kale oo aan ka ogaan karno ganacsigaaga?
Macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa loo isticmaali doonaa si ay u taageeraan khibradaada inta lagu jiro boggaan, si aad u maamusho helitaanka koontadaada, iyo ujeedooyin kale oo lagu sharraxayo noo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.